Maitiro Ekugadzirisa Kodi "Kugadziridza Kwakundikana" Kanganiso - WebSetNet
Chimwe chezvakanakisa nezveKi ndechekuti haisi ingori media media yekuronga nekuratidzira yako midhiya mafaera - iwe unogona zvakare nekuwedzera -kuwedzera kuti ikupe iwe functionalities nyowani senge kutarisa YouTube, kutarisa Twitch, teerera mimhanzi, uye kuteerera podcasts kunyange yako media media. Iyo nzira yaunomisikidza iyi yekuwedzera ndeye kuburikidza nemakodhi, ari mawebhusaiti iyo mafaira ekuisa anobatirwa. Sezvo Kodi yakavhurwa sosi, chero munhu anogona kugadzira yavo yekuwedzera-uye voigoverana neInternet, saka kune mazana emahara ekuwedzera-ayo ayo vashandisi veKi vanogona kuisa.
Zvisinei, aya dzimwe nguva zvinetso kana kushanda wedzera-Ons uye repositories. Mazhinji emamepostori akavharirwa gore rapfuura nekuda kwezvemutemo nyaya, saka ikozvino kune zvakawanda zvekare zvidzoreso izvo zvisisiri kushanda. Imwe nyaya izvo vashandisi veKi vanowanzo kuona i "Kugadziriswa Yakakundikana" mharidzo yekukanganisa, izvo zvinoreva kuti iyo yekuwongorora yekuwedzera iyo iwe waisa haisi kuisa nenzira kwayo kubva kune repository. Munyaya ino, tichakuudza nezve chikonzero nei kukanganisa uku kuchiitika uye wobva waratidza nzira dzaunogona kushandisa kuti iwe udzidze kugadzirira How “Kugadziridza Yakakundikana” chikanganiso.
Nei maIvashandisi Achifanira kushandisa A VPN
Tisati tapinda muruzivo rwekugadzirisa iyo yakagadziriswa yakundikana pane Kodi, pane nyaya yakakosha yekuchengetedza yekukurukura. Sezvauri kuona, kukanganisa uku kunoitika kana vashandisi vakaedza kugadzirisa imwe-yekuwedzera iyo yavakange vaisa kubva mudura. Mazhinji eaya marekodhi anotambira anowedzera-anogonesa vashandisi kuti vatarise TV kana mafirimu emahara, kana kutenderera mimhanzi. Asi izvi zvinopesana nemutemo wekopiraiti, saka nzvimbo dzinowanzo dzivhara pasi nekuda kwekutyisidzira kwepamutemo.
Iyi inyaya kune vashandisi veIri vanoshandisa zvinowedzera zvakare, sekunge wabatwa uchishandisa-on-on kuti uwane zvinyorwa zvine copyright zvisiri pamutemo ipapo unogona kutarisana nemhedzisiro yakakura kubva pakurova kune yako ISP's network kusvika pakuteverwa nemutemo. kumisikidza uye kutarisana nemubhadharo. Kana iwe uchizoshandisa zvekuwedzera zveIri ipapo unofanirwa kuzvidzivirira kubva kuzvinhu izvi.
Nzira yakanaka yekuzvichengetedza paunenge uchishandisa Kodi ndeyekuisa VPN. Ichi chidimbu che software chinodzikisira data rese rinotumirwa necomputer yako pane internet, kuti pasave neanogona kuona kuti ndeipi saiti dzauri kushanyira kana kuti mafaira api auri kuodha. Izvi zvinokuchengetedza iwe kubva kune yako ISP kana mutemo wekusimbisa kuongororesa pane yako internet zviitiko zvinosanganisira Use.
Tinokurudzira IPVanish YeIvanoshandisa
Iyo VPN iyo yatinokurudzira kune vashandisi ve Kodi IPVanish. Maficha eiyi VPN anosanganisira chengetedzo yakanakisa, nekushandisa yakasimba 256-bit encryption uye isina mutemo wekutema, pamwe nezvirongwa mune software yekuuraya switch, bhuku reDNS gadziriso, uye DNS leak kudzivirira. Nekubatana kwayo kwakakurisa kwakanakira kudurura yakakwira dudziro vhidhiyo, uye network inovhara anopfuura maseva e1000 mune anopfuura makumi matanhatu nyika dzakasiyana. Iyo software inowanikwa ye Windows, Mac OS, Android, Linux, iOS, uye Windows Runhare.
Verenga shanduro yedu yePVanish yakazara pano.
IPVanish inopa 7-day money back rekupiro iyo inoreva kuti une vhiki yekuedza iyo ngozi isina. Ndapota ona kuti Addictive Tips vanoverenga vanogona ponesa hukuru 60% pano pane chirongwa chepVanish gore negore, kutora mutengo wemwedzi kune imwe chete $ 4.87 / mo.
Nei Iyo Iyo Yakawedzeredzwa Yakundikana Kukanganisa Kuitika?
Iko "Kugadziriswa Kwakakundikana" kukanganisa kunoitika kana Kodi ichiedza kugadzirisa imwe yako yekuwedzera. Iyo nzira Kodi inoshanda, iyo nguva nenguva inogadzira zvinowedzera-mumashure kuitira kuti usawanzozviona zvichiitika. URL yeiyo repository yawaishandisa kuisa yekuwedzera yakachengetwa muhurongwa hwako, saka kana Iyo yasarudza kuti inoda kutarisa kuti idzorere pakuwedzerwa, inotsvaga yakagadziridzwa mune repository ku URL yawakachengetedza. . Kazhinji, Kodi haizowani kuwana shanduko yekuwedzera kwako, pakadaro hapana chinoitika uye iyo bhatani yekutarisa inopera, kana kuti ichawana shanduro itsva yekuwedzera iyo yaizobva yaodha uye kuisa munzvimbo yekare. kuwedzera-pa.
Kana iwe ukaona iyo yakagadziriswa yakundikana kukanganisa pane yako Kodi system, zvinoreva kuti iyi yekuwedzera-yekugadzirisa maitiro haina kubudirira. Izvi zvinoitika Kana Kodi achiona kuti pane vhezheni vhezheni yako yekuwedzera mune repository, asi iyi vhezheni itsva iyi haienderane neshanduro yekuwedzera iyo iwe ikozvino yaiswa. Izvi zvinogona kuitika kana repository ichichinja faira dhizaini kana yekuwedzera-pane shanduko yekushandura nhamba, iyo inokanganisa Kodi pamusoro pekuti yekuwedzera pane yako system inoenderana neyekuvandudza mune repository. Neimwe nzira, iko kukanganisa kunogona kuitikawo kana iyo database ye system yako ichinge yashatiswa, zvichireva kuti Kodi haigone kubatanidza zvakanaka pakati peshanduro yako yekuwedzera uye itsva.
Maitiro ekugadzirisa Kodi Kugadzirisa Yakakundikana kukanganisa
Sezvo iyo yakagadziriswa yakundikana chikanganiso inogona kukonzerwa neine dambudziko neiyo repository kana nedambudziko neka Kodi yako database, kukanganisa uku kunogona kuita zvishoma fiddly kugadzirisa. Iwe unofanirwa kuedza kugadzirisa iyo mbiri uye yako database kuti uone panowanikwa dambudziko. Edza izvo sarudzo pasi apa kugadzirisa iyo yakanganisa yakanganisa:
1. Tsvaga uone kuti Ndeipi Rongedzero Iri Kukonzera Nyaya
Kuti ugone kugadzirisa iyo yakundikana yakanganisa, unofanirwa kutanga waziva kuti ndeipi repositi iri kukonzera nyaya. Mharidzo yekukanganisa yaunoona ichataura kuti ndedzipi imwe-yekuwedzera yakakundikana kugadzirisa, saka unofanirwa kufunga kuti ndeipi nzvimbo inoshanda kune iyoyo yekuwedzera. Zvingave kuti une imwe repository yaunoshandisa kuisa akawanda akasiyana-siyana -kuwedzera, kana zvingave kuti iwe wakashandisa repository kamwe chete kumisikidza chaiyo yekuwedzera. Chero zvazvingaitika, unofanirwa kutarisa chinyorwa chakatadza kugadzirisa kuti ufambire mberi pakuchigadzirisa.
Heano maitiro aunoziva kuti ndeipi repository iri kushandiswa neanowedzera-pane iyo iri kukundikana. Semuenzaniso, taura kuti iyo Neptune Rising yekuwedzera iri kutadza kugadzirisa, heino maitiro aungawana ruzivo nezve chinzvimbo chinotungamira:
Tanga paIta yako pamba peji
Enda kune Anowedzera-mune kuruboshwe ruoko menyu
Enda kune Vhidhiyo yekuwedzera-mune yekuruboshwe menyu (izvi ndezvekuti Neptune Rising iyi vhidhiyo yekuwedzera-kana iwe uchitsvaga ruzivo nezve muimbi wekuwedzera, iwe waizosarudza Mimhanzi-inowedzera pane)
Kubva pane runyorwa rwekuwedzera-tsvaga, tsvaga iyo yaunoda. Kwatiri, ndizvo Kukura Neptune. Iye zvino tarisa zita rezvinowedzera uye sarudza Ruzivo
Iye zvino iwe uchaona peji rezivo nezvekuwedzera. Tarisa pasi pechiratidzo chekuwedzera kuruboshwe uye iwe uchaona bhokisi rinoti Repository:
Izvo zvese zvakanyorwa mushure meRugwaro: izita repository iro rekuwedzera iri rakaiswa kubva. Mune ino kesi, ndiyo Blamo Repo
Sarudza Kana Iyo Repository ichiri Kuita
Zvino zvawava kuziva kuti ndeipi nyowani iri kukukonzeresa matambudziko, yave nguva yekutsvaga kumwe kuongorora. Mazhinji marekodhi akafanirwa kuvhara kana kutamira kune ma URL matsva gore rapfuura nekuda kwekukanganisa kukuru pane zvinyoro izvo zvinotambira zvinowedzera zvinogona kushandiswa kutenderera zvisiri pamutemo. Izvi zvinoreva kuti marekodhi mazhinji akamira kushanda uye kuti ungangoda kuchinja zvimwe zvinhu kuti uzvigadzise.
Nhanho yekutanga ndeyekuti google izita repository rawakaona padanho riri pamusoro uone kana iwe ukawana chero nhau pamusoro pekuvhara kwekuvhara kana kutamira kune URL itsva. Kana iyo repository yakavharwa, saka unofanirwa kuibvisa kubva kune yako system. Mune ino kesi, iwe hauchazokwanisazve kuwana zvigadziriso zvekuwedzera kwako. Nekudaro, izvo-zvinowedzera zvinofanirwa kuramba zvichishanda sekare uye haufanirwe kuona chero imwezve yekuvandudza yakundikana zvikanganiso.
Kana iyo repository ine URL itsva, saka unofanirwa kugadzirisa yako Kodi system nenzira:
Tanga pane yako yemba skrini uye ugoenda kune zvigadziridzo
Enda kune Faera maneja
Tsvaga iyo repository iwe yaunoda kugadzirisa iyo URL uye uye kurudyi kwayo tinya pairi, wo sarudza Edza sosi
Isa iyo URL nyowani mundima yemavara uye tinya panzira
Nemaoko Rongedza Iyo Inodzosera
Kana iyo repository isina kutorwa uye isina kufambisa URL asi iwe uchiri kuwana iyo yakundikana yakundikana chikanganiso, saka unofanirwa kuedza kumanikidza repository kuti ivandudze. Dzimwe nguva kudzoreredza kunonamira uye kusingaise mushe, saka zvinoita senge system sekunge kuti dhizaini yakaiswa asi zvakadaro hazvishande apo vekuwedzera vanoedza kuzvimisikidza. Kumanikidza bhuku rekuvandudza repodhi rinogadzirisa nyaya iyi.
Heano maitiro ekumanikidza kudzosera repository kugadzirisa:
Kutanga kubva pane yako yekumba
Enda kune Anowedzera-ons
Dzvanya pane icon inotaridzika sebhokisi rakavhurika
Enda kuKuisa kubva ku zip file
Tsvaga zip yefaira repositori. Mune yedu isu, isu tinoenda kune blamo uye tinobva tonyora mbiri repository.blamo-0.1.3.zip
Izvi zvichagadzirisa repository. Iwe uchaona ziviso ichiti repository inogadziridzwa mushure mechipiri
Iye zvino isu tinofanirwa kugadzirisa iyo-yekuwedzera iyo iri kukonzera dambudziko. Enda kune angu ekuwedzera
Zvino enda kuVhidhiyo yekuwedzera-yevhidhiyo (yekuwedzera vhidhiyo seNeptune Rising - zvimwe enda kuMimhanzi yekuwedzera kana chero rimwe boka raunoda)
Tsvaga iyo yekuwedzera iyo yakanga isiri kugadzirisa zvakanaka - isu tichaishandisa Kukura Neptune zvakare zvemuenzaniso uyu. Kurudyi tinya pairi uye sarudza Ruzivo
Kubva pane rekuwedzera-pane peji peji ruzivo, sarudza Dzosera kubva kumenyu iri pazasi
Izvi zvinounza kumusoro kwebhokisi rinoratidza repositories kuti iwe unowanikwa yekugadzirisa iyo yekuwedzera. Sarudza iyo repository iyo iwe uchangobva kuvandudza - mune iyi nyaya ndeye 1.3.9, Blamo Repo
Iye zvino iyo yekuwedzera ichagadzirisa uye iwe uchaona yekuwedzera-yakagadziriswa ziviso. Zvino haufanirwe kuona kugadzirisa kwakundikana cherozve
Usakanganwa: Shandisa VPN paunenge uchipfuura kuburikidza neKapa. IPVanish inopa vedu vaverengi anokonzerwa kushandiswa kwe60% uye iwe unongobhadhara $ 4.87 mwedzi kuti uchengetedze kuongorora kwako kuchengeteka uye yega.
Tsiva iyo Repository
Asi chii chaunoita kana iwe ukaona kuti izvo zvawanga uchishandisa zvavhara zvizere? Izvi zvaitika nguva pfupi yadarika nemadepistori anosanganisira Noobs uye maNerds, Colossus, Kutarisa Girazi, Smash, nezvimwe. Aya marekodhi akavhara zvachose uye haasisipo kune dhawunirodha-wedzera zvigadziriso.
Kana iyo repository yawave uchishandisa ikozvino yakavharwa, zvakakosha kuti iwe ubvise repository kubva kune yako system. Izvi zvinodaro nekuti kusiya zvekare zvinyorwa zvekare zveURL zvakabatana nehurongwa hwako zvinogona kuve njodzi yekuchengetedzeka, kunyanya kana chipfambi chakavharirwa pasi nekuda kwekukanganisa copyright. Iwe unogona kuchengeta izvo-zvinowedzera zvawakaisa kubva kune zvawanikwa, asi iwe unofanirwa kubvisa icho chinobviswa kubva peji rako reFail maneja. Paunobvisa chinyoreso asi uchisiya chekuwedzera chakaiswa, iyo yekuwedzera inoramba ichishanda sezvayakaita kare. Izvo hazvizogone kuvandudzwa. Muchidimbu, izvi hazvifanirwe kuve dambudziko nekuti zvicharamba zvichishanda. Asi mukufamba kwenguva, kushomeka kwematsva kunoreva kuti bugs ichaonekwa mune yekuwedzera uye haizove yakavimbika.
Kana chinzvimbo chakadzimwa, kubheja kwako kwakanaka ndekwekutsvaga imwe repositori yaunogona kushandisa pakuisa nyowani nyowani, uye kugadzirisa zvawedzesa zvawakaisa izvozvi. Ona ruzivo rwekuti ungadzima sei dhodhi pano uye mazano ezvimwe zvadzinobatsira pano.
Gadzirisa Yakakanganisika Dhatabheti Mafaira
Izvo zvinofukidza nzira dzekugadzirisa dhizaini yakakundikana chikanganiso kana dambudziko riine chinzvimbo chauri kushandisa. Asi iwe uchayeuka kuti iko kukanganisa kunogona zvakare kukonzerwa nechinetso neyako Dhe database. Kana iyo dhatabheki ichinge yashatiswa, hazvigoneki kugadzirisa iyo-yekuwedzera sezvo paine kusarongeka kune izvo zvinotaurwa nedata rako. Mune ino kesi, iwe unofanirwa kuvakazve yako database. Heano maitiro ekuita izvozvo:
Kutanga kubva pane yako Kodi chidzitiro
Enda kuZvirongwa nekudzvanya icon inoita kunge cog
Zvino tinya kaviri paProfessor directory kubva pane runyorwa kuruboshwe
Dzvanya kaviri paDatabhesi
Tsvaga yako yekuwedzera-database database faira. Iyi faira ichanzi AddonsXX.db, iine XX inomiririra nhamba. Mune uyu muenzaniso, iyo faira yatiri kuda ndeyeAdons27.db
Iye zvino tinya panzira yekuwedzera-ons database faira uye sarudza Delete
Izvi zvinobvisa dhatabhesi rako. Iye zvino restart Kodi uye iyo dhatabhesi faira ichavakwa. Izvi zvinofanirwa kugadzirisa yako yakundikana chikanganiso
Kwidziridzo Yekupedzisira Vhezheni Ye Kodi
Pakupedzisira, kana pasina chimwe chezviito ichi chakabatsira, saka imwe nzira yakanaka yekugadzirisa nyaya dzakasiyana siyana neKi ndeyokuvandudza kune yazvino vhezheni. Kodi haingozvigadzirise pachayo, saka kana wanga uchishandisa Kodi kwemakore mashoma ipapo unogona kuve akati wandei shanduro kumashure Izvi zvinogona kukonzera nyaya yekuwirirana nema-add-ons anovamisa kushanda mushe.
Kuti ugadzirise Kodi yako kune yazvino vhezheni, tevera mirairo pano. Rangarira kuita backup usati wagadzirisa kuitira kuti usarasikirwe nemafaira ako akakosha, ma-add-on, kana marongero.
Tinovimba kuti izvi zvakubatsira iwe kugadzirisa iyo yakundikana yakundikana kukanganisa paIri. Wakatora here chikanganiso ichi, uye wakachigadzirisa sei? Wakave uine rombo rakanaka nemaitiro ataikurudzira? Ngatizivisei nezvazvo uye chii chakashanda kwauri mune zvakataurwa pazasi.
IPVanish VPN ine hupfumi seti yezvinhu, asi zvakare inoshandisa kune vashandisi vevashandi
Category: gadziriro yekugadzira o que é
← Nzira yekuisa Notepad ++ mu Ubuntu 18.04 / 16.04 via Snap Nokia A1 Plus: In-display mifananidzo yeminwe, SD845 nezvimwe →